Ego Biblehụnanya nke Bible nke juputara n’obi na nkpuru obi gi | EKPERE NA OZI
Hụnanya Bible na-ehota ihe jupụtara gị n'obi na mkpụrụ obi
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 11, 2020 Septemba 11, 2020
Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị na ịhụnanya Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi, sie ike, sie ike, na-agbanwe ndụ yana maka mmadụ niile. Anyị nwere ike ịtụkwasị obi n'ịhụnanya Chineke ma kwere n'ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ site na onyinye nke nzọpụta. Anyị nwere ike zuo ike n'ịhụnanya Chineke na-amata na Ọ chọrọ ihe kachasị mma maka anyị ma nwee atụmatụ na nzube maka ihe niile anyị na-eche ihu. Obi siri anyị ike na Chineke ga-ahụ anyị n'anya ma mara na ọ na-ekwesị ntụkwasị obi ma na-achị achị. Anyị achịkọtara ụfọdụ ọkacha mmasị ịhụnanya sitere na Akwụkwọ Nsọ iji kwado ma chetara gị ịhụnanya Chineke nwere maka gị.
Site n’ịhụnanya dị ukwuu nke Chineke nwere n’ebe anyị nọ, anyị nwere ike ịhụ ndị ọzọ n’anya ma bụrụkwa ihe atụ nke ihe ịhụnanya dị - ọ bụ ịgbaghara, na-atachi obi, ndidi, obiọma, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Anyị nwere ike iji ihe anyị mụtara banyere ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ wee jiri ya mee ka alụmdi na nwunye ka mma, ezigbo ndị enyi, ma hụkwuo onwe anyị n’anya! Akwụkwọ Nsọ na-ekwu maka ịhụnanya maka mpaghara ọ bụla ị na-achọ inweta mmekọrịta ka mma. Mee ka ihunanya ịhụnanya ndị a sitere na Bible mee ka okwukwe gị sikwuo ike ma mee ka akụkụ nile nke ịhụnanya dịkwuo mma ná ndụ gị.
Akwụkwọ Nsọ na-ekwu maka ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ
“Leenụ ụdị ịhụnanya dị ukwuu Nna hụworo anyị, nke mere e ji kpọọ anyị ụmụ Chineke! Ma nke ahụ bụ ihe anyị bụ! Ihe kpatara na uwa amaghi anyi bu na amaghi ya ”. - 1 Jọn 3: 1
“Anyi wee mara ma dabere na ihunanya Chineke n’ebe anyi no. Chineke bụ ịhụnanya. Onye obula nke bi n’ime ihunanya n’ime Chineke bi n’ime ya, Chineke n’ime ha ”. - 1 Jọn 4:16
"N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla kwere na Ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi" - Jọn 3:16
“Keleenụ Chineke nke eluigwe. Lovehụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi ”- Abụ Ọma 136: 26
"Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ a: mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị." Ndị Rom 5: 8
Ọ buru na ag theme ka ugwu ma jijiji, ọbuná ugwu ntà nile wezuga onwe-ha, ma ebere agagh-ewezugam n'ọnọdum, ma ọb covenantub covenanta-ndum nke udo adighi-ewezuga onwe-ya; - Aịzaya 54:10
Bible kwuru banyere ịhụnanya
Okwu Akwukwo Nso Banyere Ihunanya Ndi ozo
"Ezigbo ndị enyi m, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke. - 1 Jọn 4: 7
"Anyị nwere mmasị na ya n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya mbụ." - 1 Jọn 4:19
“Ishụnanya nwere ogologo ntachi obi, ịhụnanya nwere obiọma. Ọ dịghị enwe anyaụfụ, ọ naghị etu ọnụ, ọ naghị etu ọnụ. Ọ dịghị asọpụrụ ndị ọzọ, ọ dịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị, ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ dịghị agụkọ ihe ọjọọ. Hụnanya adighi-a delighturi n'ime ihe ojoo kama o na-a rejouri n'ime eziokwu. Na-echebe mgbe niile, tụkwasịrị obi mgbe niile, na-atụ anya mgbe niile, na-anọgidesi ike mgbe niile. Neverhụnanya anaghị ada ada. Mana ebe amuma di, ha gakwusi; ebe asusu di, ha g theynwe obi-utọ; ebe ihe-ọmuma di, ọ gāgabiga. ”- 1 Ndị Kọrịnt 13: 4-8
“Ka ụgwọ ọ bụla ghara ịbụ nke pụtara ìhè, ma e wezụga ụgwọ nọgidere na-ahụrịta ibe anyị n’anya, n’ihi na onye ọ bụla nke hụrụ ndị ọzọ n’anya emezuwo iwu ahụ. Iwu, "Akwala iko", "Egbula ọchụ", "Ezula ohi", "Egbula ya," na iwu ọ bụla ọzọ nwere ike ịbụ, ka a chịkọtara n'otu iwu a: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị." Hụnanya anaghị ewute onye agbata obi gị. Ya mere ihunanya bu mmezu nke iwu “. - Ndị Rom 13: 8-10
"Childrenmụaka, anyị anaghị ahụ n'anya n'okwu ọnụ ma ọ bụ n'okwu, kama ọ bụ n'omume nakwa n'eziokwu." 1 Jọn 3:18
"O wee sị ya," Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Onyenwe anyị Chineke gị n'anya. Nka bu ihe uku na ihe mbu enyere n'iwu. Nke abụọ abụrụ nke yiri: will ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị “. - Matiu 22: 37-39
"Greatesthụnanya kasịnụ enweghị nke a: inye mmadụ ndụ maka ndị enyi ya." - Jọn 15:13
Akwụkwọ Nsọ kwuru banyere ike ịhụnanya
“Egwu adịghị n’ịhụnanya. Mana ịhụnanya zuru oke na-eme ka egwu kwụsị, n'ihi na egwu nwere ntaramahụhụ. Onye ọ bụla nke na-atụ egwu ezughi oke n'ịhụnanya. " - 1 Jọn 4: 8 '
“Emela ihe ọ bụla n'ihi ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga na-enweghị isi. Kama, jiri obi umeala were onwe gị kpọrọ ihe karịa onwe gị, na-elekwasịghị anya n'ọdịmma nke onwe gị kama na-achọ ọdịmma nke onye ọ bụla n'ime ndị ọzọ. ”- Ndị Filipaị 2: 3-4
“Karịsịa ihe nile, hụrịta ibe unu n'anya miri emi, n'ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie”. - 1 Pita 4: 8
“Younụ ka a na-ekwu, sị:“ Hụ onye agbata obi gị n’anya ma kpọọ onye iro gị asị “. Ma asị m unu: hụ ndị iro unu n'anya ma kpee ekpere maka ndị na-esogbu unu ”- Matiu 5: 43-44
“Akpogidere m na Kraist. Ọ bụghị m na-ebi ndụ, kama Christ bi m. Ma ndu nkem bi ndu ub inu a dika m'n livekwe site n'okwukwe nke Ọkpara Chineke, Onye hurum n'anya, rara kwa Onwe-ya nye n'ihim. ”- Ndị Galeshia 2:20
Bible kwuru banyere ịhụnanya anyị nwere
“JEHOVA pụtara n’ihu anyị n’oge gara aga, sị,“ Ahụrụ m gị n’anya ebighebi; Eji m obiọma na-adịghị ada ada dọta gị “. - Jeremaya 31: 3
“You ga-ewerekwa obi gị dum, werekwa mkpụrụ obi gị dum, were obi gị dum na ike gị dum hụ Onyenwe anyị Chineke n'anya”. - Mak 10:30
"N'ime nke a bụ ịhụnanya, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Ọ hụrụ anyị n'anya wee zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ mkpuchi mmehie nke mmehie anyị". - 1 Jọn 4:10
“Ma ugbua ihe atọ ndị a fọdụrụ: okwukwe, olile-anya na ịhụnanya. Ma nke kasị n’ime ha bụ ịhụnanya. 1 Ndị Kọrịnt 13:13
“Na-eme ihe niile n'ịhụnanya” - 1 Ndị Kọrịnt 13:14
"Atekpọasị na-akpali esemokwu, mana ịhụnanya na-ekpuchi mmejọ niile." Mme N̄ke 10:12
"Anyị makwaara na maka ndị hụrụ Chineke n'anya ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị." - Ndị Rom 8:28
Akwụkwọ Nsọ na-ekwu maka izu ike n'ịhụnanya Chineke
Ya mere, anyi matara ma dabere na ihunanya Chineke nwere n’ebe anyi no. Chineke bụ ịhụnanya. Onye ọ bụla nke na-ebi ndu n’ịhụnanya, na-ebi n’ime Chukwu, Chukwu dịkwa n’ime ya ”. - Jọn 4:16
"Karịa ihe ndị a niile jiri ịhụnanya, nke na-ejikọ ihe niile na nkwekọrịta zuru oke." - Ndị Kọlọsi 3:14
"Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị" - Ndị Rom 5: 8
“Ee e, n'ihe a niile, anyị karịrị ndị meriri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, enweghị ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị “. - Ndị Rom 8: 37-39
“Mara kwa na Onye-nwe-unu Chineke-unu bu Chineke, Chineke kwesiri ntukwasi-obi, Nke n anddebe ọb covenantub covenanta-ndu-Ya na ebere-Ya n’ebe ndi huworo Ya n’anya, ndi n keepdebe kwa ihe nile O nyere n’iwu, rue nnù ọb generationsọ abua na ọgu iri” Deuterọnọmi 7: 9
“Onye-nwe-ayi Chineke-gi nọ n'etiti gi, dike nke nāzọputa; enye ayadara ke idatesịt fo; ọ ga-eji ịhụnanya ya mee ka obi jụrụ gị; ọ ga-a rejoiceụrị ọ overụ n'ihi gị oké songs ”. - Zefanaịa 7:13
Ima okot oto mme Psalm
"Ma gị onwe gị, Onyenwe anyị, bụ Chineke nwere ọmịiko na amara, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, nwee ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi." - Abụ Ọma 86:15
"Ebe ọ bụ na ịhụnanya gị mgbe niile dị mma karịa ndụ, egbugbere ọnụ m ga-aja gị." - Abụ Ọma 63: 3
“Ka m metụta ụtụtụ nke ịhụnanya gị na-enweghị atụ, n'ihi na atụkwasịrị m gị obi. Mee ka m mara ụzọ m ga-agbaso, n'ihi na ọ bụ gị ka m na-eweli mkpụrụ obi m. " Abụ Ọma 143: 8
“N’ihi na ihunanya gị dị ukwuu, nke toro n’eluigwe; ikwesị ntụkwasị obi gị na-erute n'eluigwe. " - Abụ Ọma 57:10
“Ajụla m ebere gị, Onyenwe anyị; ka ịhụnanya gị na ikwesị ntụkwasị obi gị na-echebe m mgbe niile ”. - Abụ Ọma 40:11
"Gị onwe gị, Onyenwe anyị, na-eme amara ma dị mma, juputara n'ịhụnanya maka ndị niile na-akpọ gị." - Abụ Ọma 86: 5
"Mgbe m kwuru," Mykwụ m na - amị amị ", ịhụnanya gị na - adịghị ada ada, Onyenwe anyị, kwadoro m." - Abụ Ọma 94:11
“Keleenụ Jehova, n’ihi na ọ dị mma. Lovehụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi. " - Abụ Ọma 136: 1
"N'ihi na dị ka eluigwe dị n'elu ụwa, otú ahụ ka ịhụnanya Ya dị ukwuu n'ebe ndị na-atụ egwu ya nọ." - Abụ Ọma 103: 11
Ma mu onwem atukwasiwo obi n'ebere-Gi; Obi m rejoụrịrị ọ forụ n'ihi nzọpụta gị. " - Abụ Ọma 13: 5
Nke gara aga Post Gara aga post:Otu onye ọrụ ahụike Katọlik megidere igbochi afọ ime. Clinlọọgwụ Katọlik ya chụrụ ya n'ọrụ
Next Post → Post ozo:Chee echiche taa otu esi ewulite ntọala nke ndụ gị